Customized hwokugaya hwakabvira Tools
2017-Millcraft akauya CIMT Exhibition muna Beijing
Post nguva: Jan-05-2019
China International Machine Chishandiswa Show (CIMT) yakavambwa muna 1989 ne China Machine Chishandiswa & Danho Builders 'Association, unonyanya nomukurumbira dzakawanda muchina mudziyo inoratidzirwa mu China ose vasinganzwisisike-kuverengwa gore. Zviri rimwe guru-mina remarudzi muchina Ezvemutauro kuratidzwa munyika. The O ...Read more »
2018-India AMTEX, MillCraft ari munzira
Asian Machine Danho Exhibition (AMTEX), akabvuma kuti rokumavirazuva mupiro kwayo nekukura muchina mudziyo maindasitiri kuIndia, akagumisa ayo Magazini rechi11 kubvira 6 -9 July, 2018 pana Pragati the maidan, New Delhi. The biennial muchina Ezvemutauro kuratidzwa, vakapararira mhiri 19.534 ba. Metres, akauya kuna Tab ...Read more »
Technical zano & murayiro kugashira